Shan Arimood Ayaa laga filan karaa mowjadaha Siyaasadeed ee ka dhashay kalfadhiga 3-aad ee BF? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shan Arimood Ayaa laga filan karaa mowjadaha Siyaasadeed ee ka dhashay kalfadhiga 3-aad ee BF?
15th March 2018 Ahmed weheliye Gaashaan Af Soomaali 0
Muqdisho (Mareeg News ) 10-kii Bishaan waxaa si rasmi ah uga furmay Muqdisho kalfadhiga 3 aad ee Barlamaanka 10 aad ee Somaaliya! Muuxuuse kaga duwan yahan kuwii ka horeeyey?.
Hadaba kalfadhigaan3 aad waa looga fadhiyaa lagana sugayaa in uu xaqiijiyo sanadkaan hawlaha qaran ee hor-tebinta leh ee uu ku tilmaamay gudoomiye Jawaari xafladii furitaanka. Iyo in ay bedelaan dhaqankii is qab-qabsiga, mooshinada madaxda, gobaleysiga iyo qabiileysiga, kuna hogaamiyaan dawlada iyo dadka aragti siyaasadeed, difaaca khayraadka iyo qaran-nimada
About Ahmed weheliye Gaashaan	535 Articles
DAAWO: Xildhibaan Jeesoow “Aduunyada waxaa Ugu doqonsan Dalkisoo La dhacaayo Ninkii u kaalmeeya”
XASAASI: Xildhibaanada Gabdhaha Digil iyo Mirifle Vs Xildhibaanada Wiilasha Digil iyo Mirifle!